ATN: December 2008
၂၀၀၉ ရဲ့ မုခ်မှာ
ငါ.. လာနေပြီ... ဟေ့... ... ...
အားလုံးပဲ နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင် ချမ်းမြေ့ကြပါစေ
at 7:47 AM 51 comments:
သည် ဒေသလေးကတော့... အတော့်ကို... ချစ်စရာကောင်းလေသည်။ ဘာလို့ဆို... တသက်လုံး... ရူးသွပ်လာခဲ့ သမျှသော... အိပ်မက်တွေကို... သည်မှာ... အားလုံး ရရှိ နေသောကြောင့်သာ... ဖြစ်ပါသည်။
ကြည့်ပါဦး... အရှေ့အရပ် တည့်တည့်မှာ... တည်တည်တန့်တန့်... ကျယ်ပြန့် ဖြူဖွေး နေသော... သဲမွမွ သောင်ပြင်နဲ့... ပင်လယ်ကမ်းခြေ... တခု...။ တိမ်တွေ... ကင်းစင် နေသော... တည်တည် ငြိမ်ငြိမ်... ကောင်းကင် ပြာကြီးနဲ့ အပြိုင်... အနိုင်မခံ... ပြာလဲ့ နေသည့်... ပင်လယ် ရေထုကလည်း... သူ့လှိုင်းတွေကို... အချိန်တိုင်း... အစုအရုံး အလိုက်... ကမ်းခြေကို... လာပြီး... ဦးခိုက်စေနေလေသည်။ ကမ်းခြေမှ... အနောက်ဖက်ကို... ပြန်လှည့်ကာ... လျှောက်လာ လျင်လည်း... တဖြည်းဖြည်းချင်း... မြင့်တက်လာသည့်... မြေပြန့် တခုကို... တွေ့ရမည်...။ Rock Concert တခုမှာ... စည်းချက် လိုက်ပါနေသည့်... လူတွေလို... လှုပ်ရှားနေသည့်... မြက်ပင်... စိမ်းစိမ်းလေး တွေကလည်း... သည် မြေပြန့် တခုလုံး... အပြည့်... ချစ်စရာကောင်းအောင်... ရှိနေလေသည်...။ ဖက်ဖူးရောင်နု... ကတ္တီပါ ခြုံလွှာကြီးတထည်... လူးလွန့် နေသလိုမျိုး... ဖြည်းညှင်းငြင်သာ... တိုးတိုက်လာသော... လေပြည်ထဲမှာ... ငြိမ့်ငြောင်းနေသော... မြက်ခင်းက .. အမြင် အာရုံအတွင်းမှာ... နူးညံ့ အေးချမ်းလို့... ။ သည်မြေပြန့်ပြီးတော့... တောင်ကုန်း၏... အမို့ အမောက်တွေ အတိုင်း... လိုက်လျော ညီထွေစွာ... ကွေ့ကွေ့ကောက်ကောက်... သွယ်ဖောက် ထားသည့်... လမ်းကလေးတခုက... မမောနိုင် မပမ်းနိုင်... အပြေး တက်သွားရာ... ကုန်းမို့ မြေမြင့်ကလေး... တခုကို... တွေ့ရလိမ့်မည်။ သည် ကုန်းမြေမြင့် ကလေးကလည်း... သူ ချစ်ခင် နှစ်သက်ရာ... ဖက်ဖူးရောင်... လွင်ပြင်... စိမ်းနုလေးကို... အရိပ်... မိုးပေး... နေသလိုလို...၊ စောင့်ကြပ် .. ကြည့်ရှု... နေသလိုလို...၊ အန္တရာယ်... အပေါင်းမှ... ကာကွယ်ပေး... နေသလိုလို... ။ ကုန်းမြေမြင့်၏... ညီညာသော... ပြန့်ပြူးသော... နေရာတခုမှာတော့... တထပ် အိမ်ကလေးတွေက.. အစီအရီ...။ ပင်လယ်ဆီကို... မျက်နှာ... ကိုယ်စီပြုလို့...။ ကျယ်ဝန်းသော... ခြံကလေး တခုစီက... သူတို့ သယ်ပိုးထားရာ... အိမ်ကလေး အားလုံးကို... နှလုံးသား... အတိုင်း... ခြေဆန့် နိုင်အောင်... လွတ်လပ်မှု... ပေးနေ သယောင်ယောင်...။
သည်အရာတွေ... အားလုံးက... သူ့ ကမ်းခြေလေး... ဖြစ်ပါသည်။ သူ့ ပင်လယ်လေး... ဖြစ်ပါသည်။ သူ့ လွင်ပြင်လေး... ဖြစ်ပါသည်။ သူ့ တောင်တန်းလေး... ဖြစ်ပါသည်။ သူ့ မြို့ပြကလေး .. ဖြစ်ပါသည်။ သူ့ နိုင်ငံကလေး... ဖြစ်ပါသည်။ သူ့ အိပ်မက် ကလေးလည်း... ဖြစ်ပါသည်။
တိတ်ဆိတ်... ငြိမ်သက်... အေးချမ်း... သာယာ... စိမ်းလန်း... ပြာလဲ့... ချစ်စရာ ကောင်းနေ ခဲ့သော... သည် မြို့ကလေးမှာ... သူ့ အိမ်နီးချင်းတွေက... ဘယ်သူနည်း။ ပြောပြလျှင်... ယုံကြည်ကြလိမ့်မည်... မထင်ပါ...။
သူ့ဘယ်ဖက်က အိမ်မှာ... ကဗျာဆရာ ယောဟန်အောင် နေပါသည်။ သူနဲ့ ကပ်လျက် အိမ်မှာ .. နေသူကတော့ ကဗျာဆရာ နှင်းခါးမိုး ဖြစ်ပါသည်။ သူ့ ဘယ်ဖက်က အိမ်တွေကို... ဆက်လက်ရေတွက်... ပြောပြရလျှင်... ကဗျာဆရာ ကိုငြိမ်းဝေ၊ ကဗျာဆရာ မောင်ဖုန်းမြင့်၊ ကဗျာဆရာ ကောင်းကင်ကို၊ ကဗျာဆရာ ဆောင်းယွန်းလ၊ ကဗျာဆရာ ငြိမ်းချမ်းအောင်၊ ကဗျာဆရာ လင်းဒီပ အစရှိသည့် ကဗျာဆရာများ။ သူက... ကဗျာဆရာတွေနဲ့ အတူ... နေချင်သည်ကိုး...။ အခြား ကဗျာဆရာတွေလည်း... အဲသည် ဖက်မှာ... အများကြီး နေထိုင်နေပါသည်။
သူ့ ညာဖက်ကအိမ်မှာတော့... မကေသွယ် တို့ မိသားစု... နေပါသည်...။ ထိုမှ စပြီး... ရေတွက် ပြောပြ ရလျှင်တော့... ပန်ဒိုရာတို့ ဇနီးမောင်နှံ၊ နောက်တော့ မခင်မင်းဇော် နဲ့ ကိုမင်းဇော်တို့ မိသားစု၊ မမေငြိမ်း တို့ မိသားစု၊ မိုးချိုသင်း နဲ့ ကိုဝဏတို့ ဇနီးမောင်နှံ၊ မနော်ဟရီတို့ အိမ်၊ တူးတူးသာတို့အိမ်၊ မစ်ရာ တို့အိမ်၊ စသည့်ဖြင့်... အိမ်တွေက အစဉ်လိုက်...။ သည်မိသားစုတွေကလည်း... အိမ့်ဆည်းလဲလေးတွေ... ကိုယ်စီနဲ့... ညနေ.. ညနေဖက်တွေဆို... နီးစပ်ရာ... အိမ်တွေမှာ.. ကလေးတွေ... အားလုံးကို ခေါ်လာပြီး... စုပြုံ ပျော်ပါးကြလို့... ညဉ့်နက်သည့်တိုင်... ရယ်မောသံတွေ မစဲနိုင်တဲ့... ပျော်ရွှင်စရာ အ ချိန်လေးတွေ... ပိုင်ဆိုင်ကြလို့...။
သူ့အနောက်ဖက်က လမ်းမှာတော့ ကလူသစ်၊ ပျူနိုင်ငံ ကိုအောင်၊ ဘ၀တွေ စုံတဲ့ ဆူးပြတိုက် ကိုသစ်၊ ကိုယ့်ဘလော့မှာ ကိုယ်သခင် ဆိုတဲ့ ကိုဇာနီ၊ ဒိုင်ယာရီထဲက လင်းထက်၊ အတွေးကွန်ရက်ထဲက ကိုမောင်ရင်၊ ဆိပ်ကမ်းမှာ လိပ်ဖမ်းတဲ့ ဇင်ယော်၊ လူတကာကို ကြိုဆိုနေတဲ့ ကိုဝင်းဇော်၊ မနောမြေကို ချစ်တဲ့ ဒူကဘာ၊ ဂစ်တာအတီးကောင်းတဲ့ ကိုဂင်ကြီး၊ ကရင်မဟုတ်တဲ့ ကလိုစေးထူး၊ ပြခန်းဖွင့်ထားတဲ့ ချစ်ညီကြီး သားထူး၊ ခရမ်းရောင် အိုးပုပ်ပန်းတွေ ပွင့်တဲ့ မြေက လာတယ်ဆိုတဲ့ ဂျပိန် တူမောင်မျိုး၊ စသည့်... ဘလော်ဂါများ၏... အိမ်များက... အစီအရီ... ရှိနေလေသည်...။
အခြားလမ်းများပေါ်မှာလည်း... အတွေးတိမ်တိုက်၊ သက်ဝေ၊ ကိုဇနိနဲ့မဇနိ၊ ကိုဧရာနဲ့မသီတာ၊ အမှတ်တရ လေးများနဲ့ လင်း၊ ကဗျာချစ်တဲ့ ခေးအော့စ်၊ ဂျပန်ရောက် ကမာနီလာ၊ ကိုရင်နော်ခင်လေးငယ်တို့ မိသားစု၊ ခေါင်ခေါင်၊ ပန်းခရမ်းပြာ မချို၊ ကိုပီတိ၊ ၀ိုင်တီယူက ရွာသားလေး၊ ကန့်သတ်ချက် မရှိတဲ့ ကောင်းကင်ပေါ်က မှူးဒါရီ၊ မခင်ဦးမေ၊ လင်းလက်ကြယ်စင်၊ အိုးဝေအောင်၊ တောကျောင်းဆရာ၊ မျက်ဝန်းနက်၊ လေနုအေး၊ အမှတ်တရများနဲ့ အယ်လ်ဇီ၊ ရေခဲပြင်မှာ ပွင့်တဲ့ပန်း ခွန်မြလှိုင်၊ နုသွဲ့၊ နန်းညီ၊ သူနင်းဆီ၊ မိုးပျံငှက်၊ မေမိုး၊ ကာရန်မဲ့ အတွေးစများနဲ့ စိုးဝှပ်၊ ၈၈ရဲ့ နော်မန်၊ အိပ်မက်နက်၊ ကိုရင်ညိန်း၊ စကင်ဒီနေးဗီးယားက ကိုသက်ဦး၊ ကိုမျိုးဝင်းဇော်၊ JulyDream အစရှိသည့် ဘလော်ဂါတို့၏ အိမ်များနှင့်... အခြားဘလော်ဂါများ၏... အိမ်များကို... အစီအရီ... တွေ့ရမည်... ဖြစ်ပါသည်။ (မိမိ အမည် မပါသူများ... ကျွန်ုပ်အား... စိတ်မဆိုးကြ စေချင်ပါ....း)
အမှန်တကယ်မတော့... သည်လှပသာယာသော ကမ်းခြေမြို့ကလေးတခုလုံးက... ဘလော်ဂါ များချည်းသာ... နေထိုင်ပါသည်...။ ဘလော်ဂါများသာ... နေထိုင်သော ကြောင့်လည်း... သည်မြို့ကို... blogosphere ဟုလည်း ခေါ်ကြပါသေးသည်... ။
လမ်းကြုံလျင်... သည်မြို့ကလေးသို့... အလည်တခေါက်... လာရောက်ကြစမ်းစေ ချင်ပါသည်...။ ဘလော်ဂါ တို့၏... အထူး ဧည့်သည်တော်များ... (ဥပမာ- Ma Ma နှင့် Sin Dan Lar) အတွက်လည်း... ဧည့်ဂေဟာ အကြီးကြီး တခု... ရှိပါသည်...။
(mirror က စိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက် ဆိုပြီး Tag လို့ ရေးတာပါ...။)
(သူငယ်ချင်းများ... စိတ်မကောင်း ဖြစ်ကြသဖြင့်... ပို့စ်ကို... အနည်းငယ်... ပြန်လည် .. ပြင်ဆင် လိုက်ပါသည်...။ နှစ်သစ်မှာ... အားလုံးကို... ပျော်ရွှင်စေချင်ပါသည်...း)
at 4:25 AM 28 comments:
အကို့ကို... ကျနော် မဲပေးထားတယ်... ဆုရရင်... ဆူရှီ ကျွေးရမယ်... ဘီယာလည်း... ပါရမယ်နော် - ညီငယ် တယောက်က... လှမ်းပြောလာတယ်...။ - ဟ... ဟ... နေပါဦး... ဘာမဲလဲ... ဟ...။ ငါလည်း... ဘယ်ရွေးကောက်ပွဲမှ... မ၀င်မိပါဘူး... - ကျနော် ပြန်ပြော မိတော့... - အာ... အကိုကလည်း... မသိဘူးလား... အဲမှာ သွားကြည့်ကြည့်ဦး... - ဆိုပြီး လင့်ခ် တခု ပေးလာပါတယ်။ သူ ပေးတဲ့ လင့်ခ်... သွားကြည့်နေတုန်းမှာပဲ... နောက်ထပ် ညီငယ် တယောက် ကလည်း... ပြောလာပြန်သေးတယ်... - အကို့ကို... ကျနော် Vote လုပ်ထားတယ် နော...-တဲ့... ။ အား... လာ ပြန်ပြီတယောက်...။
ဒီလိုနဲ့... အဖြစ်အပျက် အလုံးစုံကို... နားလည်သွားမိတဲ့နောက်တော့... ဒီ ညီငယ် နှစ်ယောက်ကို... ပြောမိပါရဲ့... အကို ဘလော့ ရေးနေတာ... ရေးချင်လို့ ရေးနေတာ... ဆုလိုချင်လို့... ရေးနေတာမှ... မဟုတ်တာ... ငါ့တော့... မပေးနဲ့ကွာ... - ကျနော်... ပြောတော့... သူတို့ကလည်း... သူတို့ထင်တာတွေ... blah blah blah ... ပြောနေပါသေးတယ်...။
ကျနော်ကလည်း... - အေး... ဒါဆိုလည်း... ငါလည်း... ကိုယ့်လူတွေ... စုလိုက်မယ်ကွာ... ပြီးတော့... ဘာ အဖွဲ့... ဆိုပြီး... လုပ်မယ်ကွာ...။ ပြီးတော့... ဘာ အတွက်ပါ... ဆိုပြီး... ကြေငြာမယ်ကွာ...။ အဲအတွက်... ဘာ ပရိုပိုဆယ်... ဆိုပြီး... တင်မယ်ကွာ...။ ပြီးတော့... ပိုက်ပိုက်... ဘယ်လောက် ဘယ်လောက်... ရရင်... ဘာ ဆုတွေ... ပေးမယ် ဆိုပြီး... ကြေငြာမယ်ကွာ...။ ဘလော့ဂါတွေ... လိပ်စာပါသိရင်... အိမ်တံခါး... အတင်း သွား ခေါက်ပြီး... လည်လို့ရတာပေါ့... - ကျနော် ပြောချင်တာတွေ... ဆက်ပြောနေတော့... သူတို့လည်း... လက်လျှော့ သွားပုံ ရပါတယ်...။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ... ကျနော့်... စာတွေက... တဆင့်... ကျနော့်ကို... ခင်မင်လာကြတဲ့... သူတွေကို... ကျနော်... လေးစား ပါတယ်...။ သူတို့ရဲ့... ထင်မြင်ချက်တွေ၊ အကြံ ပေးချက် တွေကိုလည်း... အမြဲ တန်ဖိုးထားပြီး... ဂရု တစိုက်... ပြန်လည်... ဆွေးနွေးလေ့... ရှိပါတယ်...။
ခုတော့... မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတွေ... ညီအကို...မောင်နှမတွေ... စာဖတ် သူတွေ... အားလုံးကို... တခု တော့... သိစေချင်လို့... ဒီစာကို... ရေးပါတယ်...။
ကျနော်... ဘလော့ရေးနေတာ... တနှစ်ပဲ... ရှိပါသေးတယ်...။ ကျနော်... ဘာလို့... ဘလော့ရေးနေလဲ... ဆိုတာ ဒီပို့စ် နဲ့ နောက်တခုမှာ... ဖော်ပြထားပြီးသားပါ...။ အဲ ပို့စ် နှစ်ခုကို... သွားဖတ်ကြည့်ကြစေ ချင်ပါတယ်။ ကျနော်... ခံစားရတာတွေ... ရေးတယ်...။ ခံစားရတာတွေကို... ဘလော့ပေါ် တင်တယ်...။ ပုံသဏ္ဍာန် အမျိုးမျိုးနဲ့... ။ ကဗျာ ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်... ၊ ပန်းချီ ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်...၊ ၀တ္ထုတိုတွေလည်း... စမ်းပြီး ရေးခဲ့တယ်...၊ ဂီတ ဖွဲ့စည်းမှု... တခုခုလည်း... ဖြစ်ချင် ဖြစ်မယ်...၊ ဓါတ်ပုံတချို့... ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်...၊ ဆောင်းပါး တစောင် လည်း... ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်...၊ သို့သော်လည်း... ကျိန်းသေတာ... တခုကတော့... အားလုံးဟာ... ကျနော့်... ရင်ထဲက... တကယ်... ထွက်လာတာတွေ ချည်းပါပဲ...။ ဒါမဲ့... ခံစားရတာ... တခုခုကြောင့်... ရေးချင်လို့... ရေးနေ သော်လည်း... ကျနော် ရေးနေသမျှကို... လာရောက်... ဖတ်ရှုတဲ့သူ... အားလုံး... တခုခုတော့... ရသွားနိုင်ဖို့... စေတနာ ထားပြီး... ကြိုးစားခဲ့တာချည်းပါပဲ...။ ဒါပေသည့်... ဒါက... ဆုတဆုရဖို့... ကျနော်... လုပ်နေခဲ့တာ... မဟုတ်ပါ...။
သည်လိုနဲ့... ဘလော့ရေးသက်... တနှစ်အတွင်းမှာ... အသက်ရှူပုံချင်း... တူတဲ့... ရင်ခုန်သံချင်း... တူတဲ့... ဘလော်ဂါ... သူငယ်ချင်း ရောင်းရင်းတွေ... ရခဲ့ပြီးပါပြီ...။ တဦးနဲ့... တဦး... လူချင်း... မမြင်ဘူးကြသော်လည်း... စာတွေက... တဆင့်... တဦး နှလုံးသားကို... တဦး... ထိတွေ့ဖူးပြီ...။ တဦး ခံစားရတာကို... အခြား တဦးက... နားလည်နိုင်နေခဲ့ပြီ...။ ပြောရရင်... ရင်ဘတ် တူရာ... ရဲဘော်... မိတ်ဆွေ... မောင်နှမတွေ... ရှိနေခဲ့ပြီးပြီ...။
နောက်တခါ... ကျနော်.. ရေးသမျှ... စာတွေကို... ပုံမှန်လာဖတ်နေတဲ့... စာဖတ်သူတွေလည်း... ရှိနေခဲ့ပြီ...။ အပြန်အလှန်... ဆက်သွယ်မှုတွေလည်း... ရှိနေခဲ့ပြီးပါပြီ...။ စာဖတ်တဲ့သူတွေဟာ... ဘလော်ဂါတွေ... မဟုတ်ကြသော်ငြားလည်း... ဘလော်ဂါတွေရဲ့... နှလုံးသားကို... သိနေကြသူတွေပါပဲ...။
သည်အခါ... ကျနော်တို့ရဲ့... ဘလော်ဂိုစဖီးယားလေးဟာ... သူ့သက်ဆိုင်ရာ သက်ဆိုင်ရာ... အ၀န်းအ၀ိုင်းလေး တွေနဲ့... အလို အလျောက်... လည်ပတ် နေပြီးပါပြီ...။ ကျနော့် အတွက်ဆို... တခြားဘာမှ... ထပ် မလိုတော့ ပါဘူး...။ ခုလို... ကျနော် ပြောနေရတာ... အဓိပ္ပါယ် ရှိပါတယ်...။
ကဗျာ... ဖတ်တဲ့... ကြိုက်တဲ့... စာဖတ်သူတွေက... ကဗျာရေးတဲ့... ဘလော့တွေဆီ... သွားမှာပါပဲ...။ သည်လိုပဲ... ဓါတ်ပုံ စိတ်ဝင်စားသူတွေက... ဓါတ်ပုံ ဘလော့တွေဆီ...။ ပန်းချီ... စိတ်ဝင်စားသူတွေက... ပန်းချီ... ဘလော့တွေဆီ...။ တေးဂီတ... နှစ်သက်သူတွေကလည်း... သီချင်းတွေ ရှိရာဆီ...။ ဆိုတော့... ... ... ...
လိုရင်း... တိုရှင်း... အားလုံးကို... ပြောရရင်တော့... ကျနော်က.. ဘာဆုမှ... မလိုချင်ပါ...။ အဲ အတွက် ကြောင့်... ကျနော့... သူငယ်ချင်း ဘလော်ဂါ တွေရော... ကျနော့် ဘလော့ကို ဖတ်သူတွေကိုရော... ဘာ ဆု တစုံတရာ... အတွက်နဲ့မှ... ကျနော့်ကို... မဲမပေးကြဖို့နဲ့... ထို့အတူ... ဆုပေးမယ် ဆိုတဲ့... ဆရာသမားများကိုလည်း... အဲစာရင်းထဲက... ကျနော့်ကို... ဖယ်ထုတ် ပေးပါ...လို့... ပြောပါရစေ...။
ဘိုလိုပြောရရင်တော့.... Leave me alone, please!!!!!! Will you?
at 4:27 PM 21 comments:
မိတ်ဆွေ ဘလော်ဂါ အားလုံးနဲ့
လာရောက် ဖတ်ရှုသူ အားလုံး အတွက်
ပျော်ရွှင်စရာ ခရစ်စ်မတ်စ် အချိန်ကာလ ဖြစ်ကြပါစေ။
at 2:08 PM 24 comments:
ငိုသံတွေ... တိတ်လို့... သွားမှ... ပြောပါရစေ... မေ...
ငိုနေရင်... ကိုယ်ဘယ်လို... ရှင်း... ရှင်း... မင်း... လက်ခံမှာ... မဟုတ်ဘူးလေ...
ရင်ခွင်မှာ... ခံစားရတာချင်း... အတူတူ... ဘယ်သူက... ဘယ်သူ့ထက်...
ပိုမိုလို့... ပူနိုင်မှာတုန်း... အချစ်ရေ... ရွဲ့ကာ... မပြောလိုက်နဲ့ဦး...
ပျင်းရိငြည်းငွေ့နေပုံရသော... ဆောင်းနှင်းတချို့... စိတ်မပါ... လက်မပါ... ခပ်ပါးပါး ကျနေသည့်... ပြာမှိုင်းမှိုင်း... ညဉ့်ဦး၏... ခြောက်ကပ်... တိတ်ဆိတ်နေသော... နံရံကို... ဖြေးဖြေးညင်သာ... ဖြိုဖျက် ချလိုက်သည့်... လေးတွဲ့တွဲ့... သီချင်းသံက... သူ့... နားထဲသို့... ဓါးသွားတခုလို... စူးရှနေသော... လေနှင့်အတူ... ၀င်ရောက် လာသည်...။ သည်ညအဖို့... ပထမဆုံး... လွင့်မျော လာသော... သည်သီချင်းသံကြောင့်... ခိုးလို့ခုလု... ၀ါးကြမ်းခင်း ပေါ်မှ... အေးစက်စက်... အိပ်ယာပေါ်တွင်... လဲလျောင်းကာ... အိပ်ဖို့... ကြိုးစားနေရင်းက... အိပ်မပျော်နိုင် သေးသည့်... သူလည်း... ဂွမ်းစောင်ပါးကို... ကိုယ်ပေါ်တွင်... သိုင်းခြုံ လိုက်ရင်း... သူ့... ပြတင်း တံခါးမှ... ၀ိုးတ၀ါး... အလင်းရောင်ဖြင့်... မသဲမကွဲ... မြင်နေရသော... စစ်ရေး ပြကွင်းကို... လှမ်းကြည့်လိုက် မိသည်...။ လရောင်... မရှိသော်လည်း... အားနည်းနေသော... ကြယ်ရောင် အလင်းများကြားမှ... ခပ်ဝါးဝါး... လှမ်းမြင် နေရသော... တပ်ရင်း (၂၀၅)ဖက် အခြမ်းမှ.... ခွဲ(၂) ဘားတိုက် အရှေ့... စစ်ရေး ပြကွင်း အစပ်ရှိ... သစ်တုံး များပေါ်တွင်... ထိုင်နေကြသော... အရိပ်များကို... သူ... လှမ်းမြင်နေရသည်...။ တခါတရံ... အားရပါးရ... ဖွာရှိုက် လိုက်သော... ဆေးလိပ် မီးဖွားများ၏... အနီရောင် မီးများမှ တဆင့်... အမှောင်ထုထဲမှာ... ဆွေးမြေ့ နေသော... မျက်နှာများ ကိုလည်း... မသဲမကွဲ... မြင်လိုက်ရသေးသည်...။ အော်... ညတညကို... လွန်မြောက်ဖို့... သူတို့... ကြိုးစားနေကြ တာပါလေ...။ ရင်ထဲက... ဝေဒနာတွေကို... သံစဉ် တချို့နဲ့... ချွေးသိပ် အိပ်စက်ဖို့... သူတို့... အိပ်မက်... မက်နေကြတာပါလေ...။
သူ့... အေကေ ၄၇ သေနတ်ကို... ညာဖက်ပုခုံးစောင်းမှာ... အောက်စိုက်လွယ်ရင်း... ဘာရယ်မဟုတ်... ဘားတိုက် ပေါ်ကနေ... အလိုအလျောက်... သူ... ဆင်းမိလျက်သား... ဖြစ်သွားသည်...။ အေးစက် နေသော... စစ်ဖိနပ်ထဲသို့... သူ့ခြေထောက်ကို... ထည့်လိုက်မိမှ... သူ့ခြေဖ၀ါးက... စစ်ဖိနပ်၏ ကြမ်းတမ်းမှုကို... ထိတွေ့ရမှ... ခြေအိတ်မပါသည်ကို... သူ... သတိရလိုက်သည်...။ ရှိစေတော့...။ စစ်ဖိနပ်ကို... သည် အတိုင်း... စီးပြီး... စစ်ရေးပြကွင်းကို... သူ... ဖြတ်လျှောက်... သွားနေမိသည်...။ စစ်ရေးပြကွင်းကို... အမှောင် ထဲမှာ... တိတ်တဆိတ်... သူ... ဖြတ်လျှောက်သွားနေစဉ်မှာ... သူ့... စိတ် အလျဉ်တွေကလည်း... သည် ဒေါန တောင်ရိုး တခုလုံးကို... ဖြတ်ကျော်ပြီး... မြေပြန့်ဆီ... ပြေးလွှားသွားနေပြီ... မဟုတ်လား...။
၁၉၈၅ မှာ... သိပ္ပံဘွဲ့တခု... သူ... ရသည်...။ ထုံးစံအတိုင်း... ဗမာပြည်မှ... ဘွဲ့ရ လူငယ်များ၏... အစဉ် အလာ အရ... သူလည်း... ဘွဲ့ရ အလုပ်လက်မဲ့... ဖြစ်ပြီ...။ သည်လိုနဲ့... အဲသည် အချိန်က... စတင် ခေတ်စား နေသော... ၀ိုင်း ကျူရှင်... ခေါ်သည့်... စာသင်ဝိုင်းလေးတွေမှာ... အင်္ဂလိပ်စာ ဆရာအဖြစ်... သူ့... ပထမ ဆုံးသော... အသက် မွေးဝမ်း ကြောင်းမှုကို... စတင်ရသည်လေ...။ သူက... အဲသည်အချိန်က... အသက် ၂၀ ကျော်စ...။ သူ့ တပည့်တွေက... ၁၅-၁၆ နှစ် ၀န်းကျင်တွေ...။ တပည့်တွေက... သူ့ကို... ဆရာဟု... ခေါ်သည်...။ သူကတော့... တပည့်တွေကို... ခင်ဗျားတို့... ကျနော်တို့နဲ့... ပြောသည်...။ ရှုပ်တော့... အတော်... ရှုပ်ကုန် သည်...။ တပည့်တွေက... နောက်တော့... ဆရာ... ပြောချင်သလိုသာ... ပြောပါတော့...လို့... ပြောလာ ကြတော့... ယောက်ျားလေး တပည့်တွေကို... မင်းနဲ့... ငါ... ပြောသည်...။ မိန်းကလေးတွေကိုတော့... ညည်းတို့... လို့... သူ... ပြောသည်...။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်... တပည့်တွေ အားလုံးက... သူ့ကို... လေးစားမှုရှိသည်...။ သူ့... စေတနာကို... သိသည်...။ သည်လိုနဲ့... နောက် တနှစ် အကြာမှာတော့... သူ့... တပည့်တွေနဲ့... သူက... မောင် နှမ တွေလို... ဖြစ်နေကြ တော့သည်...။ သည်လိုနဲ့... ညီမလေးကို... သူ... တွေ့ခဲ့ရခြင်းပါပေ...။
တရက်သားမှာ... သူ့ဝိုင်းကျူရှင်ရှိရာ အိမ်တွင်... စားပွဲဝိုင်းတွင်... ငိုနေသော... သည် ညီမလေးကို... သူ... တွေ့ခဲ့ရသည်...။ သည် ညီမလေးက... ကျောင်းသူအသစ်...။ သည်လိုနဲ့... ကျန်သည့်... တပည့်များကို မေးစမ်း ရင်းမှ... ငိုနေရသည့် အကြောင်းကို... သိရတော့သည်...။ ဖခင်ဖြစ်သူ... အဖမ်းခံရသဖြင့်... ငိုနေခြင်း ပါပေ...။ သည်လိုနဲ့... မေးမြန်း ပြောဆိုရင်း... သည်ညီမလေးရဲ့... ဖခင်က... သူ့ဖခင်နဲ့... ရဲဘော် ရဲဘက်တွေ... ဖြစ်နေ ကြောင်းကိုပါ... သူ... ထပ်မံသိရှိလာရသည်...။ - အေး... ညည်း... ဘာမှ စိတ်အား ငယ်စရာ မလိုဘူး...။ အမှန် တရား အတွက်... ရပ်တည်တဲ့ သူတွေကို... အားလုံးက... ချစ်ကြပါတယ်...။ ငါ့... အဖေလည်း... အဲလိုပဲ... အဖမ်းခံရ... အထိန်းသိမ်းခံရ တာပဲလေ... ။ တို့တွေက... ဘ၀တူတွေပါပဲ... ။ ဘာမှ အားငယ်နေစရာ မလိုဘူး...။ အကိုတို့မှာ... အသိုင်းအ၀ိုင်း ရှိနေတာပဲ... ။ အားလုံးက... အချင်းချင်းကို... ၀ိုင်းဝန်း စောင့်ရှောက် နေကြတာပါ...။ ဘာမှ အားမငယ်နဲ့... ဟေ့... - သူ... သည်လို... ပြောနေချိန်မှာ... မျက်ရည်လည်နေသော... မျက်လုံးများနဲ့... သူ့ကို... မော့ကြည့်နေသော... မျက်နှာလေးတခုက... သူ့ရင်ကို... လှုပ်ခါ သွားခဲ့စေသည် ကိုလည်း... သူ... အထိတ်တလန့်... သိရှိခဲ့သေးသည်...။
သည်လိုနဲ့... အတိုချုပ်... ပြောရလျင်... ဘ၀တူနေသော... လူ ၂ ယောက်... ချစ်ခြင်း မေတ္တာကို... အတူတကွ... တွေ့ရှိ သွားကြသည်မှာလည်း... မထူးဆန်းလှ-ဟု... ပြောရမည် ထင်သည်...။
သည်လိုနဲ့... ချစ်သူသက်တမ်း ၃ နှစ် မပြည့်သေးခင်မှာ... ခွဲခွာရဖို့ အကြောင်းက... ရှိလာခဲ့သည်လေ...။ ၁၉၈၈ ခုနှစ်... ဒီမိုကရေစီ တောင်းဆိုသော လူထုအရေးတော်ပုံကြီးမှာ... သူက... ထဲထဲဝင်ဝင်... ပါဝင်နေခဲ့ပြီ...။ စစ်အာဏာ သိမ်းသည့်... စက်တင်ဘာလ (၁၈) ရက်နေ့ညမှာတော့... လက်နက်ကိုင် တိုက်ပွဲထဲမှာ... ကိုယ်တိုင် ကိုယ်ကျ... ပါဝင်ဖို့... သူ... ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်...။ သည်အခါ... မြို့ပြဘ၀ကို မစွန့်လွှတ်ခင်... သူ... တွေ့ရမည့် သူတွေကို... သွားတွေ့သည်...။ သူမိခင်ဖက်မှ.. အဖိုးနဲ့ အဖွားကို... သူ... သွားကန်တော့သည်...။ အဖေနဲ့ အမေကိုတော့... သွားမတွေ့နိုင်တော့...။ ဖုန်းထဲမှတဆင့်... ပြောဆို... နှုတ်ဆက်ခဲ့သည်...။ အဖေကတော့... တခွန်းပဲ ပြောသည်... မင့်လမ်းကို... မင်းပဲရွေးရမှာ... ငါရွေးပေးလို့မရဘူး...။ အမေကလည်း... တခွန်းပဲ ပြောသည်... လက်နက်ချတဲ့ အလုပ်နဲ့... သစ္စာဖောက်တဲ့ အလုပ်ကိုတော့... ဘယ်တော့မှ မလုပ်နဲ့... ဟေ့... တဲ့...။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်.. အဖေနဲ့ အမေက... ပေးလိုက်သော... စိတ်ခွန်အားတွေ... သူ့... နှလုံးသားနဲ့... သွေးကြောတွေထဲ... လှည့်ပတ်စီးဆင်းနေပါပြီ...။
ခရီးထွက်ဖို့... အစစ... အရာရာ... စီစဉ်ပြီးသည့်အခါ... ညီမလေးကို... နောက်ဆုံးအကြိမ်အဖြစ်... တွေ့ရသည်...။ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ... ကိုမောင်မောင်နဲ့ ကိုဇော်ကြီးတို့... စီစဉ်ထားပေးသည့်... အိမ်တအိမ်မှာ... တွေ့ရသည်...။ ပြောစရာ... စကားကလည်း... သူ့အတွက်... တခွန်းပဲ ရှိသည်...။ - ငါ... ပြန်လာခဲ့မယ်... ညီမလေး...။ အဲဒီနေ့ကို... နင်... သစ္စာရှိရှိ... စောင့်နေပါ...။ - ငိုပြီးရင်း... ငိုနေသော... ညီမလေးကို... သူ... မကြည့်ခဲ့ပါ...။ ဘာလို့ဆို... သူ့ခြေလှမ်းတွေကို... ပြန်ဆွဲထားမည့်... မျက်ဝန်းတစုံကို... သူ... မကြည့်ရဲသော ကြောင့်သာ... ဖြစ်ပါသည်..။ - ဘာလို့... သွားမှာလဲ...။ ဘာလို့... သွားမှာလဲ... အကို...။ အကို... သွားစရာမလိုပါဘူး...။ ဘာကြောင့်... တခြားသူတွေက... မသွားပဲ... အကိုက... သွားရတာလဲ...- အထပ်ထပ်... မေးနေသော... ညီမလေး... အမေးတွေကို... - ငါ... သွားမှ... ဖြစ်မှာလေ...။ ကျန်တဲ့သူတွေက... ဒီမှာနေလို့.. ရသေးတယ်...။ ပြီးတော့... လုပ်စရာရှိတာတွေ... သူတို့... ဆက်လုပ်လို့ရသေးတယ်လေ... - သူ... ပြောနေမိ သော်လည်း... ညီမလေးကတော့... လက်ခံမည်... မဟုတ်မှန်း... သူ...သိနေသည်ပဲလေ...။ - အဲလောက်တောင်... သွားချင်နေရင်လည်း... အကို... ဘယ်တော့မှ... ပြန်မလာနဲ့တော့... - ရွဲ့ပြောနေသော... စကားကို... နားခါးနေမိသော်လည်း... ခံစားချက်တို့ကို... သူ... သိနေပါသည်...။ - ငါ... ပြန်လာမှာပါ... ညီမလေး... ။ နင်... ယုံကြည်ထားလိုက်... - သူ... ပြောပြီး... အိမ်ထဲမှ... ထွက်လာမိသည်...။ ခွဲခွာခြင်းကို... နှစ်သိမ့်နိုင်သည့်... အပြုံးတခုပင်... သူ... မရခဲ့ပါချေ...။ သူ့... နောက်ကို... ကပ်ပါလာခဲ့သည်က... ငိုရှိုက်သံ သဲ့သဲ့သာ...။
ဆောင်းည၏... အေးစက်နေသော... လေပြေထဲတွင်... ဆက်လက်... လွင့်မျောနေသော... သီချင်းသံကို... နာခံရင်း... စစ်ရေးပြကွင်းကို... တလှမ်းချင်း... လျှောက်ကာ... ဂစ်တာတီးနေကြသည့်... ရဲဘော်တွေဆီ... သူ... ရောက်လာ ခဲ့သည်...။ မည်သူကမျှ... ပရိသန္တာရ... စကားတွေ... ပြောပြီး... သူ့ကို... ဆီးကြို... မနေကြပါ...။ သူ... ဘာ့ကြောင့်... ဂစ်တာတီးနေသည့်ဆီကို... ရောက်လာကြောင်း... အားလုံးက... သိနေကြသည်လေ...။ ဂစ်တာ သံနှင့်... သီချင်းသံမှ... လွဲ၍... မည်သည့်... စကားကိုမျှ... မဆိုကြသော... လူတစုသည်... နှလုံးသားချင်း... တူနေသော... ၊ အိပ်မက်... တခုကို... အတူတူ... မက်နေသော... ၊ အလင်းရောင်... တခုကို... အတူတကွ... တူးထုတ် နေသော... ၊ ကြေကွဲ မေတ္တာပုံပြင် တပုဒ်စီကို... နှလုံးသား၏... အနက်ရှိုင်းဆုံး... နေရာတခုမှာ... လူမသိ... သူမသိ... လျှို့ဝှက်စွာ... မြှုပ်နှံထားကြသော... ၊ .... သော ၊ ..... သော၊ .... သော။
လွတ်နေသော... သစ်တုံးတခုအပေါ်... သူ... ထိုင်လိုက်ရင်း... သူ့နှုတ်ခမ်းဖျားမှ... တေးသွားတချို့ကို... တီးခတ် နေသော... ဂစ်တာသံနှင့်အတူ... လိုက်လျောညီထွေစွာ... သူ့... နှလုံးသားအတိုင်း... ဟစ်ကြွေး လိုက်ပါသည်...။ အားလုံးကလည်း... အတူတကွ... တညီတညာတည်း... သီဆိုနေကြသည်လေ...။
လူသံတွေ... ဆိတ်လို့သွားမှ... ခွဲပါရစေ... မေ...
မြင်နေရင်... ကိုယ်ဘယ်လို... ပြေး... ပြေး... အဝေး... ရောက်နိုင်မယ်... မထင်ဘူးလေ...
ပြန်လည်ကာ... ဆုံစည်းရတော့ဦးမလိုလို... ထင်ရုံပဲ...
သည့်ထက်တော့... သေချာလို့... မရရာနိုင်ဘူး... အချစ်ရေ... မဲ့ကာ... ပြုံးစမ်းပါဦး...
ယာယီတော့... ခွဲရမှာပဲ... အချစ်ရေ... နေနှင့်ဦး...
ပြန်မလာရင်... ထာဝရခွဲခြင်းလို့... မှတ်လိုက်ကွယ်...
စောင့်လို့တော့... နေရစ်ဦး... မမုန်းသရွေ့တော့... စောင့်လိုက်ဦး... ...
သူငယ်ချင်း တယောက်က... သီချင်း တပုဒ်လောက်... ထပ်တီးပါဆိုလို့... တွေ့တဲ့ သီချင်းတပုဒ်... ကောက်တီး လိုက်တာပါ...။ ဘယ်ဖက်... လက်ခလယ်က... ဟိုး... တနေ့က... ဓါး... ထိထားလို့... နည်းနည်းနာနေတယ်...။ အတတ်နိုင်ဆုံးတော့... ကောင်းအောင်... တီးထားပါတယ်...။ (ကိုသစ်ရေ့... တီးလိုက်ပြီနော...း)
ဒီသီချင်းက... အမှန်တော့... Chamber Music ပါ။ Johann Pachelbel... စပ်ဆို သီကုံးခဲ့တာ... ဖြစ်ပါတယ်။ ခု ကျနော် တီးထားတာကတော့... Classical Guitar Version ပါ...။ သီချင်းက ရှည်တော့... Vid ကလည်း... File Size ကြီးနေပါတယ်..။ 100 MB ထက် ကြီးနေရင်... Blogspot မှာ... တင်လို့ မရပါဘူး...။ ဒါနဲ့... တ၀က်လောက်... ဖြတ်ချပြီး... တီးထားတာပါ...။ Original Chamber Music ကို... နားထောင်ချင်ရင်တော့... ဒီမှာ... နားထောင်နိုင် ပါတယ်... ။ အကယ်၍... ဆူဆူညံညံလေးတွေ... နားထောင်ချင်တယ် ဆိုရင်တော့... New Version ဖြစ်တဲ့... Rock Style နဲ့... Canon Rock ကို... ကျနော့် ပို့စ်တခုမှာ... နားထောင်နိုင်ပါတယ်...။ ကျနော်... တီးထားတာတော့... မဟုတ်ပါ...း)
အောက်မှာ... စိတ်ဝင်စားလို့... ပြန်တီးချင်တဲ့သူတွေ... တီးနိုင်အောင်... ကျနော့် သီချင်း စာအုပ်ထဲက... စာမျက်နှာတွေကို... မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်...။
အိမ်က... ထွက်လာသည်မှာ... ကြာပြီ...။ ကြာပြီ...ဆို... အတော့ကို... ကြာနေပြီ...။ ဘယ်လောက်တောင်... ကြာနေပြီလဲ...ဆိုတော့... ထွက်လာခဲ့တဲ့... ရက်ကနေ... ပြန် တွက်ရပေ မပေါ့...။ အိမ်က... ထွက်လာတဲ့နေ့က... ၁၉၈၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၂၁) ရက်...။ ခုဆို... ဒီဇင်ဘာလ (၁၈) ရက်၊ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဆိုတော့...။ အနှစ် ၂၀ တောင်... မကတော့ဘူး...။ လတောင်... စွန်းနေပြီ...။
အနှစ် ၂၀ ဆိုတာ... နည်းနောတဲ့... အချိန် ကာလတွေ... မဟုတ်...။ လူသားတယောက်... မွေးဖွား လာရာကနေ... လူ့ဘ၀မှာ... အတွေ့ အကြုံတွေ... အတတ် ပညာတွေနဲ့... ကိုယ့် ခြေထောက်အပေါ်... ကိုယ် ရပ်တည် နိုင် လောက်အောင်... ပြီးပြည့်စုံသည် အထိ... လုံလောက်တဲ့... အချိန်ကာလ...။ သည်ကာလအတွင်းမှာ... ကိုယ်... လိုက်စားရာ... သို့မဟုတ်... ကိုယ် ရူးသွပ်ရာ... အတတ် ပညာ... တခုခုမှာ... တဖက်ကမ်း... ခပ်နိုင်လောက် အောင်ကို... လုံလောက်တဲ့... အချိန် ကာလပေပဲ...။
၁၉၈၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၂၁) ရက်မှာ... မွေးတဲ့... ကလေးတယောက်ဟာ... ကျားကျား...... မမ... ခုဆို... အသက် ၂၀ ပြည့်ပြီးပြီ...။ တနှစ်တတန်း.. မှန်မှန်... အောင်ခဲ့ရင်... ဘွဲ့ရတယောက်... ဖြစ်နေပြီ...။ လေ့လာ လိုက်စား ခဲ့တဲ့... အတတ် ပညာ တခုကို...လိုက်လို့... ခုဆိုရင်... ပညာရှင် တယောက်... ဖြစ်နေလောက်ပြီ...။ ဘ၀... တခုကို... ကိုယ်တိုင် ကိုယ်ကျ... စတင်... တည်ဆောက် နေသူတယောက်... ဖြစ်နေလောက်ပြီ...။ လက်တွဲဖော်... တယောက်နဲ့တောင်... ဘ၀... တခုကို... အတူတကွ... တည်ဆောက် နေကြမဲ့... အချိန် ကာလ တောင်... ဖြစ်နေပြီ...။
ပြန်စဉ်းစားကြည့်မိတော့... ၁၉၈၈ ခုနှစ် မတ်လ၊ ဖုန်းမော် အရေးအခင်းကနေ... စတင်လိုက်တဲ့... ၁၃၅၀ ပြည့်... ဒီမိုကရေစီ... အရေးတော်ပုံကြီးဟာ... ခုဆို... အနှစ် ၂၀ ရှိခဲ့ပြီ...။ ဒီမိုကရေစီ... ရရှိရေး... လှုပ်ရှားမှုကြီး... တခု လုံးရဲ့... သက်တမ်းဟာ... ခုဆို... အနှစ်... ၂၀... ရှိနေခဲ့ပြီးပြီ...။
ဒါဆို... ၁၉၈၈ ခုနှစ် မတ်လကတည်းက... မွေးဖွားဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြတဲ့... ဒီမိုကရေစီ... ကလေးလေးဟာ... ၂၀၀၈ ခုနှစ်ရဲ့... ခုချိန်ဆို... လူလားမြောက်နေပြီပေါ့...။ သူ... ကိုယ်တိုင် ကိုယ်ကျ... ဒီမိုကရေစီ... နိုင်ငံတော်... ဘ၀... တခုကို... တည်ဆောက်... နေပြီပေါ့...။
တကယ့်... အဖြစ်အပျက်မတော့... သည်လို ... မဟုတ်သေး...။ ကလေးလေးက... အနှစ် နှစ်ဆယ်... သက်တမ်း ရှိခဲ့ပြီး... အတွေ့ အကြုံတွေ... စုံနေခဲ့သည့်တိုင်... ကိုယ့် ခြေထောက်ပေါ် ကိုယ်... မရပ်နိုင်သေး...။ ကိုယ်ပိုင် ဘ၀... တခုကို... မထူထောင် နိုင်သေး...။ ပြောရရင်... လူလား... မမြောက်နိုင်သေး....။
ဘယ်သူမှ... မငြင်းဆိုနိုင်တဲ့... အချက်အလက်ကတော့... ဒီမိုကရေစီ... ကလေးလေးဟာ... အနှစ် နှစ်ဆယ်... ကြာသည့်တိုင်... ကိုယ်တိုင်... လမ်းမလျှောက်နိုင်သေးတာပါပဲ...။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်... သည်အနှစ်နှစ်ဆယ်...ဆိုတာကို... ကျနော်တို့အားလုံး... မှတ်မှတ်ရရ... နာကျင်နေခဲ့ကြပါပြီ...။
၁၉၈၈ ခုနှစ်ကစပြီး... ဗမာပြည်မှာ... ရှိရှိသမျှ... မိသားစုတွေ အတော်များများရဲ.့.. ဘ၀တွေဟာ... ပြောင်းလဲ သွားပါတယ်...။ မိဘတွေက... သား သမီးတွေနဲ့... ကွဲ...။ သားသမီးတွေက... မိဘတွေနဲ့...ကွဲ...။ တချို့ မိသားစု တွေမှာ... မိဘတွေက... သား သမီးတွေကို... ဆုံးရှုံး...။ တချို့ မိသားစုတွေမှာတော့... သား သမီးတွေက... မိဘတွေကို... ဆုံးရှုံး....။
ကျိန်းသေတာ တခုကတော့... ၁၉၈၈ ဟာ... ဗမာပြည်မှာ ရှိရှိသမျှ... မိသားစု အတော် များများရဲ့... ဘ၀ကို... ပြောင်းပြန် လှန်ပစ်ခဲ့တာပါပဲ...။
မိသားစုဝင်တွေ... တချို့ဟာ... ငရဲသားတွေရဲ့... အကျဉ်းစခန်းတွေမှာ... ကိုယ့်ကိုယ်ကို... ရှာဖွေ တွေ့ရှိ သွားတယ်...။ တချို့ကတော့... သုသာန်မှာ... စကား... တလုံးတလေမှကို... မဆိုနိုင်အောင်... နှုတ်ပိတ်... တိတ်ဆိတ်လို့...။ တချို့ကတော့... တောကြို အုံကြားထဲမှာ... လက်နက် တစုံတရာကို... အံကြိတ်... ကိုင်စွဲရင်း...။ တချို့ ကတော့... အိမ်နဲ့... ဝေးရာမှာ... ခြောက်ခြား မျက်လုံးတွေနဲ့... ပတ်ဝန်းကျင်တခုလုံးကို... ကျီးကန်း တောင်းမှောက်... ကြည့်လို့...။ တချို့ကတော့... ကိုယ့်အိမ်ထဲမှာ... ကိုယ်နေရင်း... ကိုယ့်နှုတ်ခမ်းတွေကို... ကိုယ်... တင်းတင်း... စေ့လို့...။
သည်လိုနဲ့... အမှန်တရားအတွက်... ကိုယ် နိုင်ရာ နိုင်ရာ... တာဝန်ကို... ထမ်းရွက် ခဲ့ကြသူတွေ... နေရာတိုင်း... ၀န်းကျင်တိုင်း... မြို့တိုင်း... နယ်တိုင်းမှာ... တွေ့ခဲ့ကြ... တွေ့နေရ... တွေ့နေရဦးမှာပါပဲ...။ သမိုင်းက... ကိုယ့် ပခုံးပေါ်ကို... တင်ပေးလိုက်တဲ့... တာဝန်ကို... ထမ်းရွက် သယ်ပိုးရင်း... အချိန်ကာလတွေကို... မေ့ထား ခဲ့ကြ ရတယ်။ တချို့လည်း... ဥပဒေဘောင်အတွင်းမှာ... ပါတီအဖွဲ့အစည်းတွေထဲ... ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရင်း...။ တချို့ တော့လည်း... လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေ အတွင်းမှာ... ။ တချို့ တော့လည်း... မြေအောက် လုပ်ငန်းတွေ... လုပ်ဆောင်လို့...။ တချို့ တလေ တော့လည်း... ပြည်ပမှာ...။ အားလုံးဟာ... ကလေးငယ်လေး တယောက်... လူလား မြောက်ဖို့... ကြိုးစားနေခဲ့ကြ...။
သည်လိုနဲ့... အချိန်ကာလက... အနှစ်နှစ်ဆယ်... ဆိုတဲ့... အရေအတွက် တခုကို... ရောက်လာတဲ့အခါ... သည် ကလေးငယ်လေးဟာ... လမ်းလျှောက်ဖို့... မပြောနဲ့... ထိုင်တောင် မထိုင်နိုင်သေး... ပက်လက်လေး... ဖြစ်နေတုံး ဆိုတော့... အားလုံးက... ရင်နာနေရတယ်...။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်... အမှန်တရားကို... ချစ်တတ်တဲ့သူတွေ အားလုံးဟာ... ဒဏ်ရာရခဲ့ပါပြီ...။
ခုတော့... သည်ဒဏ်ရာဟာ... အနှစ် နှစ်ဆယ် ကြာခဲ့ပြီ...။ အိုင်းအမာ... တခုလို... ဗမာပြည်ရဲ့... ရင်ဘတ် ပေါ်မှာ... ဖုထစ်နေတဲ့... သည်ဒဏ်ရာဟာ... အားလုံး... နာကျင်နေရတဲ့... အနာတခုပါပဲ...။ သည်အနာဟာ... မပြယ်သေးတဲ့ ဒဏ်ရာ... ပါပဲ...။
ဒဏ်ရာတွေ... ရတော့... ကြောင်တွေလို... ကျားတွေလို... ကိုယ့်ဒဏ်ရာတွေကို... ကိုယ့်လျှာနဲ့... ကိုယ်... လျက်ရတယ်...။ အနှစ် နှစ်ဆယ် ကြာလာတော့... ဒဏ်ရာတွေက... ပြင်းလာတယ်...။ ကျားနာတွေလိုပဲ... သည် ဒဏ်ရာတွေကို... ထိမိရင်... ဘယ်သူမှ... မခံနိုင်ဘူး...။ အလိုအလျောက်ကို... ပြင်းပြင်းထန်ထန်... တုန့်ပြန် တတ်လာ ကြတယ်...။
တချို့က... ဥပဒေဘောင်အတွင်းက... တိုက်ပွဲဝင်နေသူတွေကို... လက်ညှိုးထိုးတယ်...။ တချို့က... လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေကို မေးငေါ့တယ်...။ တချို့က... ပြည်ပ ရောက်နေသူတွေကို... အပြစ်ဖို့တယ်...။ တချို့က... ပြည်သူလူထုကြီးကို... မျက်စောင်း ထိုးတယ်...။
ဘယ်လိုပဲ... ဖြစ်ဖြစ်... အားလုံးဟာ... အနှစ်နှစ်ဆယ်ကပေးလိုက်တဲ့... ဒဏ်ရာတွေ... ကိုယ်စီနဲ့ပါ...။ ပြင်းထန်လာတဲ့... ဒဏ်ရာတွေမှာ... သင်ခန်းစာတချို့ကို... တွေ့ရတယ်...။ အဲ သည်အခါ... ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ်.. လျှာနဲ့ လျက်လို့ မရတော့ဘူး...။
၁၉၈၈ ခုနှစ်... လူထုတိုက်ပွဲတွေ... အမြင့်ဆုံး အမှတ်ကို... ရောက်နေချိန်မှာ... အပြင်းထန်ဆုံးသော... လူထု တိုက်ပွဲကို... လက်နက်ကိုင် တိုက်ပွဲနဲ့ ... မပေါင်းစပ်နိုင်ခဲ့ကြဘူး။ ဒါဟာ... တကယ့်... အဖြစ် အပျက်ပါ..။ အဲဒါကြောင့်ပဲ... ၁၉၈၈... လူထု အရေးတော်ပုံကြီး... အောင်ပွဲနဲ့ ဝေးခဲ့တယ်။
လက်နက်ကိုင်... အဖွဲ့အစည်းတိုင်းမှာ.. အဲအခြေအနေနဲ့... ပတ်သက်လို့... အကျိုး အကြောင်း... အချက် အလက်တွေ... ရှိနိုင် ပါတယ်။ ဘာလို့ပြောနိုင်လဲ... ဆိုတော့.. ကျနော် ကိုယ်တိုင်... လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေး ထဲမှာ... ပါဝင်ခဲ့ဖူးတာ ကြောင့်ပါပဲ...။ သို့သော်လည်း... လူထုတိုက်ပွဲကို... လက်နက်ကိုင် တိုက်ပွဲနဲ့... မပေါင်းစပ် နိုင်ခဲ့တဲ့... ချို့ယွင်းချက်ကြီးကို... အနှစ်နှစ်ဆယ်တိုင်... မသိချင်ယောင်... ဆောင်နေ လို့တော့... မရပါဘူး...။
နောက်တခုကတော့... ဘုံရန်သူကို... အားလုံးက... သိနေကြသည့်တိုင်... လက်တွေ့မှာ... အဖွဲ့ အစည်း တိုင်းဟာ... ကိုယ့်အဖွဲ့ အစည်း အတွင်းမှာကို... ၀ါဒရေးရာ... အယူအဆရေးရာ... ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာ... ဘာသာရေးရာ... အတွင်း ပဍိပက္ခတွေနဲ့... နပမ်းလုံးနေခဲ့ကြတယ်...။ စည်းရုံးရေးအရ... ပြိုကွဲနေခဲ့ ကြတယ်...။ ကွန်မြူနစ်တွေ... ဆိုရှယ်လစ်တွေ... မဆလဟောင်းတွေ... တပ်ထွက်တွေ... ဦးနုလူတွေ... ဖဆပလတွေ... ခရစ်ယာန်တွေ... ဗုဒ္ဓဘာသာတွေ... အကြမ်းမဲ့တိုက်ပွဲ... လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲ... သေနတ် တချက်မှ မဖေါက်ဖူးခဲ့တဲ့ကောင်... ထောင်မကျခဲ့ဖူးတဲ့ကောင်... တောင်ကျော်တွေ.... သင်္ဘောသားတွေ... စာအုပ်သမားတွေ... စသည်ဖြင့်... စကားလုံးတွေ ထောင်ချီ နေခဲ့တယ်..။ တဖွဲ့ချင်းစီမှာ... ပြသနာတွေ... အမျိုးစုံနေခဲ့ကြပြီး... မှန်မှန်ကန်ကန်... မဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ ကြတဲ့အခါ... ဘုံရန်သူ ပျောက်နေခဲ့တာ... အမှန်ပါပဲ...။
သည်လိုနဲ့... အဖွဲ့အစည်းတွေဟာ... အနှစ်နှစ်ဆယ်အကြာမှာ... တဖြည်းဖြည်း... အားနည်း လာတာပါပဲ...။ အုပ်စုတွေ ကွဲတယ်... အဖွဲ့ဝင်တွေ နှုတ်ထွက်တယ်... နိုင်ငံရပ်ခြားတွေကို ထွက်သွားတယ်... စသည်ဖြင့်... အဖွဲ့တွေဟာ... အားနည်း လာတာပါပဲ...။ တဖွဲ့ချင်းစီမှာ... အားနည်း လာတဲ့အခါ... အဲအဖွဲ့တွေ... စုစည်း ထားတဲ့... တပ်ပေါင်းစုတွေမှာလည်း... အားနည်းမှုတွေ... ဖြစ်လာတော့တာပဲ မဟုတ်လား...။ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တွေ... အားနည်း လာတဲ့အခါ... ရန်သူ့ဖိအားကို... တစုံတရာ... ခံစားလာရတာ... အမှန်ပါပဲ...။ သည် အခါမှာ... ငြိမ်းအဖွဲ့တွေ... ပေါ်ပေါက် လာတော့တာပါပဲ...။ သည်အခါ... လက်နက်ကိုင် အင်အားစုတွေမှာ... ပိုလို့တောင်... အခက်အခဲ... ကြီးလာကြရတာပါပဲ...။
နောက်တခုကလည်း... တလျှောက်လုံးမှာ... ငြင်းခုန်နေခဲ့ကြတဲ့... အကြမ်းမဖက် (Non-violence Action) နဲ့ အကြမ်းဖက် (Armed Struggle).. ကွဲလွဲ နေမှုကလည်း... ဒီမိုကရေစီရေး... လှုပ်ရှားမှုကြီးတခုလုံးကို... ရိုက်ခတ်ပါတယ်..။ LA က အမျိုးသားနေ့ စာပေဟောပြောပွဲမှာ... ဆရာစွမ်းရည် ပြောသွားခဲ့တဲ့... စကားကို... ကျနော်... အတော် သဘောကျပါတယ်...။ အကြမ်းဖက်ဖက်... အနုဖက်ဖက်... အရေးကြီးတာက... တခုခုကို... ဖက်နေဖို့ပါပဲ... ဆိုတဲ့... ဆရာ့စကားက... အလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့... စကားပါ...။
ကျိန်းသေတာတခုကတော့... လက်နက်ကိုင် တိုက်ပွဲနဲ့... လူထုတိုက်ပွဲကို... မပေါင်းစပ်နိုင်သမျှ...၊ စည်းရုံးရေး ပြိုကွဲနေမှုတွေကို... မဖြေရှင်းနိုင်သမျှ... ၊ လက်နက်ကိုင် တိုက်ပွဲနဲ့... ကျန်တဲ့ တိုက်ပွဲ ပုံသဏ္ဍာန်တွေကို... မှန်မှန် ကန်ကန်... မပေါင်းစပ်နိုင်သမျှ... ကျနော်တို့... မြင်ချင်တဲ့... ကလေးလေး တယောက်... သူ့ ခြေထောက်ပေါ်... သူ ရပ်နေတာကို... မြင်ရဖို့... ဝေးပါသေးသည်...ဟု... ယူဆမိပါကြောင်း...။ ။
link to this post မှာ... မဆိုင်တဲ့... ပို့စ်တွေ... လာချိတ်နေတာကစပြီး... စိတ် အနှောက်အယှက်... ဖြစ်လိုက် တာ... ခုထိပဲ...။ ခုတော့... ဘာကြောင့်ဖြစ်မှန်း... မသိသေးပေမယ့်... ကိုယ်တယောက်တည်း... ဖြစ်နေတာ... မဟုတ် မှန်း တော့... သိသွားပြီလေ..။ နည်းနည်းတော့... စိတ်အေးသွားတယ်...။ အကြံဥာဏ်... လာပေးကြတဲ့... ညီ အကို မောင်နှမတွေ... အားလုံးကို... တကယ်ပဲ... ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဒါမယ့်... အချိန်တွေတော့... အတော့ကို... ကုန်သွားတယ်...။ အဲဒါကိုလည်း... စိတ်တိုနေမိသေးတယ်...။ ဘာလို့ ဆို... စာရေးရမယ့်... အချိန်တွေမှာ... အဲတာနဲ့... အချိန်တွေ... ကုန်သွားလို့...။ နို့မို့ဆို... ပို့စ်... ၂ ခုလောက် တောင်... တင်ပြီး... သွားလောက်ပြီ။ ဒီကြားထဲ... အလုပ်က... ပြန်လာ တော့... ကား Dashboard မှာ... Brake Lamp -ဆိုတဲ့ Indicater က... ပေါ်နေတယ်...။ ကား Brake ကို နင်းတာနဲ့... လင်းလာရမယ့်... ဘရိတ်မီးက... မလင်းဘူးလေ...။ ကိုယ်... ဘရိတ်အုပ်နေမှန်း... မသိရင်... ဘရိတ် မီးကို... မမြင်ရရင်... နောက်ကားက... ကိုယ့်ကို... ၀င်ကျုံး နိုင်တယ်လေ...။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်... မျက်စိ မှိတ်ပြီး... အိမ်ကို... ဒီအတိုင်းပဲ... ပြန်မောင်း လာတယ်...။ ကျုံးချင်တဲ့ ကောင်... ၀င်ကျုံးပေတော့... ဆိုပြီး။
အပါတ်မန့်ကို... ပြန်ရောက်တော့... ကားကို... ပတ်ကင်းမှာ ထိုးရင်းနဲ့... ကားခေါင်းကို... တွေ့လိုက်မိတော့... တယောက်ယောက်က... အကြွေစေ့... တခုခုနဲ့... (ဒါမှမဟုတ်... တခြား တခုခုနဲ့)... ကားခေါင်းပေါ်မှာ... စာရေး သွားတယ်...။ SINC ... ဆိုပဲ... ။ အကြီးကြီး...။ ဘောနက်ပေါ်မှာ... အောက်က ဆေးသားတွေတောင်.. ပေါ်နေ တယ်...။ ဘာ... အဓိပ္ပါယ် လည်းတော့... မသိ...။ ဒါမဲ့... ဒါဟာ Vandalism ပဲ...။ Hate Crime မှာ... Vandalism က ထိပ်ဆုံးကပဲ...။ ကိုယ့်ကို ဘယ်သူတွေက မုန်းနေပါလိ့မ့်မလဲ...။ စဉ်းစားလို့တော့... မရဘူး...။ ကိုယ်က.. အာရှသား ဖြစ်နေလို့လား...။ ဒါဆိုလဲ... အာရှသားတွေ... အများစု... နေနေတဲ့... ဒီ အပါတ်မန့်မှာ... ကိုယ့်ကို... ဘယ် အာရှသားက... မုန်းနေပါလိမ့်...။ ဦးနှောက် ခြောက်သွားတယ်...။
ဒါကြောင့်မို့လည်း... ဟိုးနေ့က... Apartment Management ဆိုပြီး... အိမ်တံခါးမှာ... စာတစောင်... လာကပ် သွားတာကိုး...။ There were some cars belongings to the residents of this apartment sufferred vandalism. If you have children please keep them away from any car that dosen't belong to their family. ... ဆိုပဲ...။
ကိုယ့်ကားခေါင်းပေါ်မှာ... အဲလို... စာမျိုးကို.. ဘယ်ကလေးကမှ... ရေးနိုင်လိမ့်မယ်.. မထင်ပါဘူး...။ လူကြီး တယောက်ပဲ... လက်လှမ်းမီနိုင်မယ့်... နေရာမှာ... ဘယ်လို... ကလေးမျိုးက... စာရေးနိုင်မလဲ... စဉ်းစား နေမိ တယ်...။ ဒေါသလည်း ထွက်တယ်...။ ဒေါသထွက်လို့မှ ... မဆုံးသေး... ကားနောက်ပိုင်းကို... ရောက်တော့... နောက်က... Defogger ကို... တယောက်ယောက်က... ချိုးထားပုံရတယ်... တွဲလောင်းကြီးကျလို့...။ အဲတာနဲ့... ပြန် မတင်ပြီး... နောက်မှန်ပေါ်ကို ... ဒီအတိုင်းပဲ... ပြန်တင်ခဲ့ရတယ်...။ စိတ်ထဲမှာတော့... နုံ့နုံ့ နုံ့နုံ့ ဖြစ်နေပြီ...။
အိမ်ပြန်ရောက်တော့... မဟေသီက... ထမင်း... မချက်ရသေးဘူး...။ လူက... ဆာလောင်နေပြီ...။ စိတ်... ထပ် တိုတယ်...။ ဒါနဲ့... ပေါက်ကွဲချင်နေတဲ့... စိတ်ကို... ထိန်းချုပ်ထားသေးတယ်...။ ဘာမှ မပြောဖြစ်ဘူး...။ အခန်းထဲ ၀င်ပြီး... ကွန်ပြူတာကို... ဖွင့်လိုက်မိတယ်...။ အိမ်ရောက်တာနဲ့... အင်တာနက်.. တန်းဖွင့်တော့တာပဲ.. ဆိုတဲ့... စကားကို... မကြားတကြား... ကြားလိုက်မိတဲ့... နောက်တော့... လေအပြည့်... ဖြစ်နေတဲ့... ပူဖေါင်းက... ပေါက်ကွဲ သွားပြီ...။
ဒါမဲ့... ဘယ်လို... ပေါက်ကွဲတာလဲ... ဆိုတော့... ဒီမှာ... သွားပေါက်ကွဲတာပါ...
အကျယ်နိုင်ဆုံး... Volume အကုန် တင်ပြီး... ဖွင့်ပစ်လိုက်တာ...။ တခန်းလုံးတော့... ဆူညံသွားတာပဲ...။
အော်ကြစမ်းကွာ... အကျယ်လောင်ဆုံး....။ ပေါက်ကွဲစမ်းကွာ... အပြင်း ထန်ဆုံး...။
Hard Rock တွေ...၊ Metal တွေ...၊ Acid ... တွေ။
ဖေါက်ခွဲ... ပေါက်ကွဲ... တိုက်စား... သွားကြစမ်းကွာ...။
တခါတခါ... ဘ၀ဆိုတာကြီးကို... ကျနော်... မုန်းတယ်...။
အခု... ကျနော့် ပို့စ်တွေတိုင်းမှာ... အောက်ဆုံးက link to this post ရဲ့ အောက်မှာ... သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ ပို့စ်တွေ... အလို အလျောက်... ပေါ်လာနေပါတယ်...။ ကျနော့်... ပို့စ်တွေနဲ့... သူတို့... ပို့စ်တွေက... ဘယ်လို နည်းနဲ့မှ... အဆက်အစပ်... မရှိ... ဖြစ်နေတော့... တခုခု... မှားနေပြီလို့... ထင်တာနဲ့... အဲ Link တွေကို... ပြန်ပြီး... ဖျက်ချပစ်လိုက်တယ်...။ ဖျက်ချပြီးတော့လည်း... နောက်တခါ... ပြန်ဖွင့်ကြည့်ရင်... နောက်ထပ်... သူငယ်ချင်းတွေရဲ့... ပို့စ်တွေ... ထပ်ပြီး... ရောက်နေပြန်ရော...။ ဒါနဲ့... Kaspersky ကို... မေးကြည့်တော့... အောက်ပါ အတိုင်း... ပေါ်လာပါတယ်...။
FireFox : Loading object http://error.000webhost.com/not_found.html, containing Torjan program Exploit.JS.XMLPars.a. Detected.
ဒါနဲ့... FireFox နဲ့ပဲ... တခြား သူငယ်ချင်းတွေရဲ့... ဘလော့တွေကို... သွားကြည့်တယ်...။ ဘာမှ... မဖြစ်ဘူး...။ ဘာမှလည်း... မတွေ့ဘူး...။ ကျနော့်... ဘလော့ကို... သွားလိုက်တာနဲ့... အဲလို... ဖြစ်နေတော့တာပဲ...။ ကျနော့်... ဘလော့မှာပဲ... ဖြစ်နေတာ...။
ခုတော့ ကျနော့် ဘလော့ မှာ Trogan တခု... မိနေပြီ...။
Kaspersky ကလည်း... မရှင်းပေးနိုင်ဘူး... ဆိုပဲ...။
ဒါနဲ့... FireFox ကို မသုံးတော့ဘူး... ဆိုပြီး... Google Chrome ကို... ဒေါင်းလုပ်ချပြီး... သုံးကြည့်တယ်...။ ဒီအတိုင်းပဲ... ဘာမှ မပြောင်းလဲဘူး...။ အောက်ပါအတိုင်း... တွေ့ရတယ်...။ FireFox နဲ့ Google Chrome ပဲ... ကွာသွားတယ်...။
Google Chrome : Loading object http://error.000webhost.com/not_found.html, containing Torjan program Exploit.JS.XMLPars.a. Detected.
ဒါနဲ့... Opera ကို... ဒေါင်းလုပ်ဆွဲပြီး... ဖွင့်ကြည့်တယ်...။ သူလည်း... ထိုနည်းလည်းကောင်းပဲ...။ ဒီလိုပဲ... ထပ်ပြီး ပေါ်လာတယ်...။
Opera Internet Browser : Loading object http://error.000webhost.com/not_found.html, containing Torjan program Exploit.JS.XMLPars.a. Detected.
ဒါနဲ့... Microsoft Internet Explorer ကို... သုံးကြည့်တော့... ပထမတော့... ဘာမှ မဖြစ်ဘူး...။ ဒါပေသည့်... ကျနော့် ဘလော့ရော... သူငယ်ချင်းတွေ... ဘလော့တွေကိုရော... လေးထောင့်အတုံးတွေပဲ... မြင်နေရတော့ တယ်...။ ကောင်းရော...။ ဒါနဲ့... ဘလော့တော့... ရေးလို့ရမှာပဲဆိုပြီး... ဖွင့်ကြည့်တော့... ဒီလို... ထပ်ပြီး... ပေါ်လာပြန်ရော...။
Internet Explorer : Loading object http://error.000webhost.com/not_found.html, containing Torjan program Exploit.JS.XMLPars.a. Detected.
ဒါနဲ့... နောက်ဆုံး... တခုတည်းကျန်တော့တဲ့... Apple က... Safari ကို.... စမ်းကြည့်ဦးမယ်... ဆိုပြီး... ဒေါင်းလုပ် ဆွဲပြီး... အင်စတောလ်... လုပ်လိုက်တယ်...။ Safari... ကို... ဖွင့်ကြည့်တော့လည်း... ထူးမခြားနား... ဖြစ်နေ တယ်...။ ထူးတာလေး... တခုပဲ... ရှိတယ်... Safari မှာတော့... detected ... လို့... မပြဘူး...။ denied... တဲ့...။
Safari Web Browser : Loading object http://error.000webhost.com/npt_found.html, containing Torjan program Exploit.JS.XMLPars.a. Denied.
(ဒါမဲ့... အကျိုးအမြတ်တခုတော့... ရှိသွားတယ်...။ ရှိရှိသမျှ... Web Browser တွေကို... သုံးမိဖူးသွားပြီ...။ အဲအထဲမှာ... Apple ရဲ့... Safari ကတော့... ဘလော့ပေါ်က... စာတွေကို... ဖတ်ဖို့... အကောင်းဆုံးပဲ...။ အတော်... သပ်ရပ်... လှပနေတာပဲ...။ ကျနော့ဘလော့ကို... မြင်ရတာ... ပုံနှိပ်ထားတဲ့... စာရွက်ကလေးတွေကို... မြင်နေရသလိုပဲ... ဗမာစာလေးတွေဆို... သပ်သပ်ရပ်ရပ်နဲ့... ထူထူထဲထဲနဲ့... လှလို့... ပလို့... ဗျား...)
ကျိန်းသေတာ... ကျနော့်ဘလော့က... တခုခု... ဖြစ်နေပြီ...။
ဘာလုပ်ရမှန်း... မသိဘူး... ဖြစ်နေတယ်...။
Technology ကလည်း... savvy မဖြစ်တော့...
- ကယ်ကြပါဦး - လို့ပဲ.... အော်လိုက်တော့တယ်...။
at 3:07 PM 22 comments:
ကျနော့်ရဲ့ညီမတယောက် ဖြစ်တဲ့... ပန်းချီဆရာမ... မသီရိက... ပေးခဲ့တဲ့... ခရစ်စမတ်... လက်ဆောင်ပါ။ ဘယ်သူမှ... မပေးခင်... သူ... အရင်ဆုံး... ပေးချင်တယ်ဆိုပြီး... ပေးလာလို့... အစောဆုံးရခဲ့တဲ့... လက်ဆောင်ပါ။ အဲလက်ဆောင်ကို... သူငယ်ချင်းတွေ... အားလုံးကို... ခရစ်စမတ် လက်ဆောင်အဖြစ်... ပြန်ပေးပါရစေ...။
ကျနော်နဲ့... ၁၀၀% တူတယ်လို့... ထင်တာပဲ။
at 6:31 PM 17 comments:
ရေခမ်းသွားတဲ့... ပင်လယ်မှာ… ။